ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်က စစ်တပ်အစိုးရ ဖိနှိပ်ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေကို ခုချိန်မှာ မေ့ပစ်မလား ခွင့်လွှတ်မလား (DVB Debate)
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်က စစ်တပ်အစိုးရ ဖိနှိပ်ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေကို ခုချိန်မှာ မေ့ပစ်မလား ခွင့်လွှတ်မလား (DVB Debate)
- DVB Debate - Part2click
- DVB Debate - Part3click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 5:22 PM
ဒါကပြည်သူတွေရဲ. သဘောထားဆန္ဒ အတိုင်းဘဲဖြစ်ရမှာပါလို.
DASSK ကပြောခဲ.တာ ကြားဖူးတယ်။
အရင်က သူမ ပြောခဲ.တာကိုပြောတာပါ ။
They all should be sentenced to death.
အသက်တွေထပ်အဆုံးရူံး ၊ ထောင်တွေ
နေ၊ စော၊ သန်း ၊တို့မကောင်းတာပါဆိုပြီး။
မသိလို့ ပါ၊ကိုနေမျိုးဇင် ၈၈ပြီးမှဘာလို့
ခွင့်လွှတ်ဖို့ ဆိုတာက အမှားကို သိပြီး တောင်းပန်သူရှိမှ.. အခုလူတွေက သူတို့အမှား သူတို့သိဖို့ နေနေသာသာ တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲမကျခင် လက်တစ်လုံးအလိုမှာ ကယ်တင်လိုက်ရတယ်လို့ ပြောလို့ကောင်းနေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။
ဦးလှဆွေရဲ့ ဂျပန်၊ ဗီယက်နန် ဥပမာတွေက ဆီလျှော်မှု လုံးဝ မရှိဘူး။
အဲလိုသာဆိုရင် ပြည်သူတွေ မလိုလားတဲ့ စစ်အာဏာရှင် စရိုက်ဆိုး အငွေ့အသက်အားလုံးကို အစိုးရရော၊ လွှတ်တော်ရော၊ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အထက်-အောက် အားလုံး စိတ်ပါလက်ပါ အပြီးသပ်စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ ဂျပန်၊ ဗီယက်နန်တို့လို့ ပြည်သူတွေက စိတ်ပါလက်ပါ ခွင့်လွှတ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ တောင်းပန်တယ်ဆိုတာ.. နောက်နောင်ကို ဒီလိုအဖြစ်မျိုးပြန် မဖြစ်စေရပါဘူး။ ဒါကြီးကို ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင် မှားမှန်းသိပါတယ်လို့ ပြည်သူ ကိုခေါင်းဆောင်လုပ်နေသူတွေက ပေးတဲ့ ပဋိဥာဉ်တစ်မျိုးပဲ။ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် အင်မတန်အားရှိစေမယ့် ကတိက၀တ် တစ်မျိုးပဲ။
ဒီလို တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူက အင်မတန် လိုလားနေတဲ့ ကတိက၀တ်မျိုးကို ရိုးသားမှုရှိတဲ့ အစိုးရဆိုရင်၊ ရုပ်သေးရုပ် မဟုတ်တဲ့ အစိုးရဆိုရင် မလုပ်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။
ကျော်ကိုကို ပြောနေတာတွေက နဲနဲ မာတာတာ ရှိပေမယ့် တကယ့် အမှန်တရားတွေပဲ။ ဒီလိုအသက်အရွယ်ရှိတဲ့ ဒီလို ပြည်သူတစ်ယောက်ရဲ့ အရောင်အသွေးမပါတဲ့ ခံစားမှု အစစ်အမှန်ပဲ။ စကားလုံးဆိုတာ လှအောင်ပြောလို့ရတယ်။ ရိုးသားစစ်မှန်မှုက လုပ်ယူလို့ မရဘူး။
စိတ်မပါသူကိုလည်း ဇွတ်ကြီးတောင်းပန်ခိုင်းလို့ အစစ်အမှန် မရနိုင်ဘူး။
အကောင်းဆုံးက linlet-journal ပြောသလို နွားက ခြင်္သေ့ဖြစ်အောင် အရင်လုပ်ပါ။ ကျွဲကူးရင် ရေပါစမြဲပါ။
ရဲရင့်မှုမရှိ၊ ခံယူချက် မခိုင်မာ၊ တာဝန်ယူလိုတဲ့ ပင်ကိုယ်ဓာတ်ခံ အားနည်းတဲ့သူတွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတာ တိုင်းပြည်နာတယ်။ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်တတ်မှ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အစဉ်အလာကြီး အားကောင်းနေသေးသမျှတော့ တိုင်းပြည်က အနှစ်သာရအားဖြင့် ဒုံရင်းအတိုင်း သွားနေဦးမှာပဲ။